फेरि बढ्न थाल्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् आज प्रति तोला कति पुग्यो सुनको मूल्य…. – SUDUR MEDIA
March 18, 2021 AdminLeaveaComment on फेरि बढ्न थाल्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् आज प्रति तोला कति पुग्यो सुनको मूल्य….
नेपाली बजारमा सुनको भाउ निरन्तर आज दोश्रो दिन वृद्धि भएको छ । आज चैत ५ गते बिहीबार सुन तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज बिहिबारको दिन छापावाला सुन प्रतितोला ८७ हजार २०० रुपैयाँमा र तेजाबी सुन प्रतितोला ८६ हजार ७५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन सुन तोलामा ३०० रुपैयाँमा उकालो लागेर प्रतितोला ८६ हजार ९०० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
आज बिहीबार सुन भाउसँगै चाँदीको भाउ पनि उकालो लागेको छ । आजको दिनमा चाँदी तोलामा २० रुपैयाँले बढोत्तरी हुँदा प्रतितोला एक हजार २९० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । बुधबार भने चाँदीको भाउ प्रतितोला १० रुपैयाँले गिरावट भएर एक हजार २७० रुपैयाँ तोकिएको महासंघको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः केटिएमको सस्तो एडभेन्चर बाइक ‘२५० एड्भेन्चर’ आजबाट नेपाली बजारमा बिक्री सुरु, यस्तो छ मुल्य ! नेपालमा उपलब्ध प्रिमियम मोटरसाइकलहरु मध्ये युवाहरुले रुचाएका मोटरसाइकल हो केटीएम । केटीएमको नेकेट बाइकहरु त नेपाली सडकमा गुडेको धेरै वर्ष भैसकेजी छ । तर पछिल्लो समय केटिएमले एडभेन्चर मोटरसाइकल पनि बजारमा ल्याएको छ । नेपालको लागि केटीएमको आधिकारक वितरक हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले २५० एड्भेञ्चरको आजबाट नेपालमा विक्री सुरु गर्दैछ ।